1 year, 2 months ago 889 Qoodi
Naannoo Oromiyaatti murteen manneen murtii kabajamuu dhabuun rakkoo mul'achaa jiru ta'uu qondaalli Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Obbo Gonfaa Atoomaa BBCtti himan.
Itti-gaafatamaan komunikeeshinii mana murtichaa Obbo Gonfaan kana kan jedhan kaleessa Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti murteen manneen murtii kabajamuu dhabuun yaaddessaa ta'era jechuu hordofeeti.
Rakkoon kun jiraachuu kan amanan obbo Gonfaan ganna darbe wajjin wal bira wayita qabamu garuu hirachaa jiraachuu isaa himan.
Ajjeechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee jeequmsa naannoo Oromiyaatti ka'een walqabatee ''rakkoon kun bali'naan mul'achaa ture, amma rakkoon sun hir'ateera'' jedhan.
Obbo Gonfaan namoota bilisaan akka gadhiifaman murtaa'e gadhiisuu diduu fi kanneen mirgi wabii eegameef gadhiisuu diduun poolisoota biratti mul'achaa ture jedhan.
Maaliif akka ajajni mana murtii hojiirra hin ooliin hafe poolisoonni wayita gaafataman ''qaama olaanaarra ajajaatu nuu kenname'' akka jedhan dubbatu Obbo Gonfaan.
Oromiyaattii mannen murtii 330tti dhiyaatu keessatti baay'ina manneen murtii fi aanaalee naannichi wajjin wal bira yeroo madaalamuu ajajni mana murtii kabajamuu dhabuun 'xiqqaadha' jedhan.'
Ajaja mana murtii kabachiisuu dhabuun yakka akka ta'e kaasuun sirreeeffamu akka qabus himan. Dhimma kanarratti Pirezidantii naannoo Oromiyaa, dabalatee qaama dhimmichi ilaallatu wajjiin mari'achaa akka jiraanillee kaasan.
Seerri mootummaa naannichaa manneen murtii hojii abbaa seerumma bilisaan akka hojjataniif akka eeyyamu abbaan taayitaa kamuu ajaja, haala murtiin itti kennamuu fi bilisummaa mana murtiirratti dhiibbaa uumuu akka hin qabne ifatti tumuu ibsan.
¤ Ibsi Komishinii Mirga Namoomaa maal jedha?
Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti murteen manneen murtii kabajamuu dhabuun yaaddessaa ta'era jedhe.
Komishinichi kana kan jedhe, barataa Mohaammad Deeksisoo murtee manni murtii magaalaa Jimmaa akka wabiin gadhiifamu murteesse hojiirra ooluu dhabuun akka isa yaaddesse ilaalchisuun ibsa baaseeni.
Komishinarri Komishinichaa Daani'el Baqqalaa (PhD) akka dubbatanitti, "Naannoo Oromiyaatti kabajamuu dhabuun murtee manneen murtii yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuun dhimmi akka malee yaaddessaadha waan ta'eef furmaataafi fala atattamaa barbaada," jedheera.
Komishinichi itti dabaluun, "Manneen hidhaa gara garaa naannoo Oromiyaa keessa jiran ulaagaawwan wabii guutanii garuu hidhamanii jiran akka hidhaatii gadhiifamaniif," gaafateera.
Qondaalota ABO mana hidhaa jiran gariin dabalatee kanneen biroo mirgi wabii eegameefii akkasumas namoota bilisaan akka gadhiifaman manni murtii murteesse poolisiin gadhiisuu diduun irra dedeebiin mul'achaa ture.
Kun ol aantummaa seeraa rakkoo keessa galcha jechuun kanneen kaasan ni jiru.
Jijjiirama biyyattiitti dhufe keessatti manneen murtii fi kenninsi tajaajila haqaa kanneen haaromfaman keessatti eeramaa turan.
Erga yeroo dhiyoon as garuu namootni hidhaman osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin yeroo dheeraa turuu fi kanneen mirga wabiin akka bahan murtaa'es poolisiin gadhiisuu diduun murtee haqaa kennuu irratti yaaddoo akka tahe paartilee siyaasaa dabalatee qaamoleen mirga namoomaaf falman ni kaasu.
Mana Murtii oromiyaa Haqa
July 15, 2021, 11:17 a.m.
Himatamaan Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuun 'balleessaa' jedhame du'aan akka adabamu gaafatame
July 14, 2021, 6:25 p.m.
Waraana Tigraay: Humni Addaa Oromiyaa ABUT (TPLF) waraanuuf bobbaafame
June 28, 2021, 8:34 a.m.
Himatamaa Janaraal Sa'aare faa ajjeesuun himatame irratti hidhaa umurii guutuu itti murtaa'e